Semalt विशेषज्ञ: जनगणना वेबसाइट हैक अट्याक र यसको प्रभावहरू
रिपोर्टले संकेत गरे कि अस्ट्रेलियामा गरिएको जनगणनाको पछाडि विदेशी ह्याकरहरू पनि थिए। अष्ट्रेलियाको तथ्याistics्क विभागले डाटाको अखण्डता कायम राख्न प्रणाली बन्द गर्न पहल गर्‍यो। थप अनुसन्धानमा, ब्यूरोले दाबी गर्‍यो कि अनलाइन जनगणना फारम चार वितरित DDoS हमलाको शिकार भएको थियो, प्रत्येक एक विशिष्ट प्रकृति र फरकको गम्भीरता।
Semalt को वरिष्ठ ग्राहक सफलता प्रबन्धक निक Chaykovskiy, किन यस्तो चीजहरू हुन्छन् भनेर वर्णन गर्दछ।
आक्रमणले साइटलाई प्रयोगकर्ताहरूका लागि अनुपलब्ध बनाउने प्रयास गर्दछ जुन यसलाई व्यवस्थित गर्न भन्दा बढी अनुरोधहरूको साथ बाढी गरेर। जानकारीका लागि वेबसाइट अनुरोधहरू सर्भरबाट पारित हुन्छन् जुन व्यक्तिलाई पृष्ठ अवलोकन गर्न स्वीकृत र अनुमति दिन्छ। यद्यपि यसले अनुरोधहरूको केहि संख्यामा मात्र काम गर्न सक्छ। एक ओभरलोडले सर्वर क्र्यासहरूको पूर्ण विफलता निम्त्याउँदछ, साइटलाई अस्थायी रूपमा अनुपलब्ध बनाउँदै। DDoS आक्रमणहरू संसारभरि फैलिएका धेरै यन्त्रहरूमा निर्भर गर्दछ, त्यसैले नाम "वितरित"। एक आपसमा जोडिएका उपकरणहरूको समूहलाई "botnets" को रूपमा चिनिन्छ प्रत्येक मालवेयर बाट संक्रमित छ कि ह्याकरहरुलाई रिमोट एक्सेस प्रयोग गरेर साइटमा फिर्ता प्रविष्टि दिन्छ।
DDoS प्रयोगको कारण
ह्याकरहरूले विभिन्न कारणका लागि DDoS आक्रमणहरू प्रयोग गर्न सक्दछन्। ती मध्ये:
ह्याक्टिभिज्म। ह्याकटिभस्टहरूले त्यस्ता हमलाहरूलाई लक्षित गरेर केहि कार्यहरूको बिरूद्ध प्रदर्शन गर्न प्रयोग गर्दछन्।
जबरजस्ती साइबर अपराधीहरू यस विधिलाई चालु आक्रमणहरू रोक्नको लागि पैसा लिनको लागि प्रयोग गर्न परिचित छन्।
व्यापार प्रतिस्पर्धा। DDoS वैध व्यवसाय अभ्यास नहुन सक्छ, तर यो कहिलेकाँहि प्रतिस्पर्धीको वेबसाइटको प्रदर्शन राख्न वा स्टल गर्न प्रयोग गरिन्छ।
स्क्रिप्ट Kiddies। केहि अनलाइन प्रयोगकर्ताहरू गेमरहरू जस्ता अन्यहरूका अनलाइन गतिविधिहरू तोडफोड गर्न पूर्व-निर्मित स्क्रिप्टहरू प्रयोग गर्छन्।
हेकर्सले जनगणना DDoS बाट के प्राप्त गर्दछ?
सर्वप्रथम, हामीले यो बुझ्नुपर्दछ कि ह्याकरहरूलाई जनगणना स्थलको सम्भावित कमजोरीहरूको बारेमा ज्ञात हुनुपर्दछ। यो सायद धेरै यातायात को कारण हुन सक्छ। नतिजा स्वरूप, अस्ट्रेलियाको सरकारको प्रणालीमा कसरी आक्रमण हुने सम्भावना छ भनेर देखाउन यो साइट अधिक मात्रामा विदेशी हेकरहरूको लागि लक्षित भएको छ। यो उनीहरूको सुरक्षा र गोपनीयता चासोको बारेमा बढि सार्वजनिक टिप्पणीहरु को लागी जवाफ हुन सक्छ। एंडी हूरनको पनि त्यस्तै भावना थियो, विश्वास गर्दै यो विन्दु एक उच्च प्रोफाइल राष्ट्रिय अनलाइन प्रणालीको सुरक्षा गर्न असफलता हो भन्ने विश्वास राख्दै। आक्रमणहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने कारणहरू पैसा र डाटा हुने सम्भावना कम हुन्छ। अन्य सम्भावित कारणहरू असन्तुष्ट विदेशी हेकरहरू हुन् जसले प्रणाली वा आफ्नो हेकर कौशलता प्रदर्शन गर्न चाहने कसैसँग सहमत छैनन्।
के डाटा सुरक्षित छ?
एक DDoS आक्रमण मुख्य रूप से साइट क्र्यास मा यसको प्रयास मा केन्द्रित गर्दछ। यो साइट मा निहित डेटा लक्षित गर्दैन। यद्यपि केही आक्रमणकारीहरूले DDoS आक्रमणलाई एक विचलनको रूपमा कार्य गर्न प्रयोग गर्न सक्दछ, जहाँबाट तिनीहरूले नेटवर्कबाट प्रयोगकर्ता डाटा टाढाबाट टाढा गर्न सक्छन् जस्तै कुरा फर्काउने टेलिकम फर्मको मामला।
एबीएस पूर्ण रूपमा विश्वास गर्दछन कि जनगणना साइट क्र्यासको मुख्य कारण DDoS हमला हो। त्यहाँ असंख्य कारणहरू हुन सक्दछन्, तर पछि एबीएससँग बढी जानकारी छ र स्रोत निर्धारण गर्दा के हेर्ने भनेर जान्ने छ, र क्षतिको दायरा। श्री। साइबर सुरक्षा विज्ञ हरुनले बताए कि अष्ट्रेलियाली सिग्नल डाइरेक्टरेट र सान्दर्भिक सरोकारवालाहरु बीचको वार्तालाप पहिले नै आकार लिईरहेको छ। यो आक्रमणको स्रोत पत्ता लगाउन सजिलो हुन सक्छ, तर आक्रमणको जटिलताले औंला-देखाउने उनीहरूलाई धेरै गाह्रो बनाउँछ।